C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay Qorshe sumcadiisa lagu bahdilayo oo laga soo abaabulayo Villa Soomaaliiya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay Qorshe sumcadiisa lagu bahdilayo oo laga soo...
C/raxmaan C/shakuur oo soo bandhigay Qorshe sumcadiisa lagu bahdilayo oo laga soo abaabulayo Villa Soomaaliiya
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka qeyliyey qorshe uu sheegay inayn ka dambeyso Villa Somalia, oo magaciisa looga been abuurtay, kaasi oo ka socda facebook.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo dhigay facebook ku sheegay in Villa Somalia ay abuurtay cinwaan facebook oo kiisa shabaha, kaasi oo uu sheegay in lagu faafiyo fikrado isaga loo tirinayo oo lagu sumcad dilayo.
Hoos ka aqriso qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee facebook uu soo dhigay.
Waxaa baraha bulshada si wayn loo wareejiyey bog been abuur ah oo qoraalka ku qoran la ii tiirinayo. Bogaygu waa hubsan yahay (verified) oo waxaa saaran calaamada buluuga ah ee bogaga rasmiga ah lagu garto. Tan kale, maadaama ay adagtahay in magacayga oo sax ah bog kale lagu sameeyo, waxaa si isdaba maris ah lagu sameeyey magaca bogga been abuurka ah.
Waxaase wax lala yaabo ah in baaritaan ay sameeyeen hawl wadeenka dhinaca warbaahinta ee xafiiskayga ay ku soo ogaadeen in boga been abuurka ah laga sameeyey Vila Somalia, dadka wareejinaya iyo muuqaalo hadalo ah kasoo sameeyeyba ay badankood yihiin taageerayaasha madaxweynaha.
Waxaa ayaan dari ah in Vila Somalia aysan ka daalaynin in ciidanka, hantida iyo warbaahinta qaranka u adeegsato sidii naftayda iyo sumcadayda loo dili lahaa. Waxaan maqli jiray “Islaanta Odayga la saar”